Kaydka Badda | Kalluunka
Sida aan wada ogsoonahay way jiraan kalluunka biyaha macaan iyo kalluunka biyaha cusbada leh. Labadaba waxaa lagu dhex heli karaa aquariums-ka. Tan waxaan ugu baahan nahay inaan ogaanno wax kasta oo aan u baahan nahay si aan u helno nooc kasta oo aquarium ah. Goobtan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay yeelasho aquarium badda taas oo kalluunkeennu si nabad ah ugu noolaan karo iyo xaaladaha ugu fiican.
Talooyin, faahfaahinta iyo fikradaha xayawaanku ku raaxaystaan ​​deegaan aad ugu eg kan dabiiciga ah, Waan ognahay inaysan isku mid ahayn laakiin haddii aan jecel nahay kalluunka, waa hab wanaagsan oo loo daryeelo, raadinta macluumaad ku saabsan mowduuca iyo astaamaha ay tahay inaynu ogaanno si kalluunka baddu ugu badbaado kaydkeenna badda.
Ma iloobi karno taas waa noole iyo inay tahay inaan daryeelo si aysan ugu dhiman isku dayga ama rabitaanka ah inaan ku sii hayno maxaabiis ahaan.
Ku dhaji quraaraddaada
Waxaa jira waxyaabo kala duwan oo lagama maarmaan u ah si sax ah u shaqeynaya aquarium-ka. Qayb kasta waxay leedahay shaqooyinkeeda waxayna dejisaa xaaladaha ...
Markay tahay bilaabida aquarium adduunka, waa inaan ogaano inay jiraan kalluun biyo macaan iyo ...
Nalalka aquarium-ka ugu fiican
Nalalka ku dhex jira quraaradda quraaradda ayaa door muhiim ah ka ciyaara nolosha kalluunkayaga. Si aad u raadiso nal leh ...
Waxaa laga yaabaa inaad go'aansato inaad haysato biyo macaan ama aquarium biyo-cusbo leh. Hadaad dooratid tan ...
Kalluunka qalin casaanka ah
Mid ka mid ah astaamaha gaarka ah ee kalluunka qalinka cas waa midabayntiisa. Iyo sidoo kale saddexda xarigood ee mugdiga ah ...
Markaad qalabeynayso aquarium-ka, ha ilaawin substrates. Suuqa dhexdiisa waxaa ku yaal baaxad ballaaran ...
Kalluun argos qalin ah
Kalluunka argos ee qalinka ah ayaa ah xulasho wanaagsan hiwaayaddayaasha biyaha macaan ee raba inay bilaabaan inay ku dhiiradaan ...
Mullet midab leh
In kasta oo mullet uusan ahayn noocyada ugu habboon ee lagu dhex beero quraaradda quraaradda. Laakiin, midabkiisa muuqaalka leh ayaa sameeya ...
Nalalka lagama maarmaanka u ah quraaradda quraaradda
Iftiiminta quraaradda quraaradda ayaa lagama maarmaan u ah sidii loo gaari lahaa nidaam deegaan ahaaneed ee badda. Waa kooxaha kala duwan ee kala duwan ...
Kalluun saddex-dabo ah
Kalluunka saddexda leh ayaa ah kalluun yar, oo qiyaastii ah 20 sentimitir, oo leh jidh si caddaalad ah u cufan iyo ...
Kalluunka Serrano ee qoyska Serranidae
Kalluunka serrano, magaciisa gaarka ah waa serrano scriba, waa nooc ka mid ah jirka dhaadheer, in kasta oo buuq badan ...
Vieja del Agua, kani waa mid ka mid ah kalluunka ugu yaabka badan
Hawlaha snails ee ku jira quraaradda quraaradda
Mackerel-ka caanka ah
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan, Sole
Kalluunka Bicolor Labeo